U.S. Senators urge Zimbabwe to respect protectors' rights - The Zimbabwe Mail
HomeMainU.S. Senators urge Zimbabwe to respect protectors’ rights
January 16, 2019 Staff Reporter Main, Politics 0
Chris Coons and Cory Booker
WASHINGTON – Unites States Senators Chris Coons and Cory Booker have urged Zimbabwean officials to respect the rights of protesters and restore access to social media, internet and telephone services following a nationwide protests staged by local people over the country’s economic crisis.
Coons and Booker said Zimbabwean authorities should urgently address people’s concerns. “… Instead, the government should work to meet the basic economic and social needs of its people. We strongly urge the Zimbabwean authorities to resolve the current situation through dialogue and non-violent, fully legal means, and for protesters to exercise their constitutional rights peacefully. Under no circumstances should the Zimbabwean government disregard the constitutional rights of its citizens, engage in the illegal suppression of expression and assembly, or employ the disproportionate use of force or extralegal violence to respond to the current situation.”
Coons and Booker are among several other senators who were in Zimbabwe before the country held its elections last July won by President Emmerson Mnangagwa and his ruling Zanu PF party.